🏃‍♀️အားကစား လုပ်ပြီးတိုင်း နာကျင်မှု လျော့နည်းအောင် - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
🏃‍♀️အားကစား လုပ်ပြီးတိုင်း နာကျင်မှု လျော့နည်းအောင်
” NO PAIN ~ NO GAIN ” ဆိုသလို
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Goal ရောက်အောင် ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးလိုက်စားချင်လို့ဖြစ်စေ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ကြပါတယ်။ Gym ဆော့ချိန် Weight တုံးမချိန်,ပြေးလွှားချိန်, Basketball, Baseball စတဲ့ အားကစားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ပြီးချိန်တွေမှာ ဆိုရင် muscle လို့ ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်း နာကျင်ပြီး ကျန်နေခဲ့တတ်ကြပါတယ်။
အလေ့အကျင့် ရှိပြီးသားသူတွေ အနေနဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ခုမှ စတဲ့ လူတွေအတွက် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါဖြစ်ကြရပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပျောက်ပြီး နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေပဲ စိုးမိုးနေတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ လမ်းပျောက်ပြီး ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာတွေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင် မရောက်နိုင်တာတွေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလို အားကစားတွေလုပ်ပြီးတိုင်း အထိမခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်ကျန်နေခဲ့တဲ့ ကြွက်သားတွေကို နာကျင်မှုလျော့နည်းအောင် လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
တစ်ကူး တစ်ကနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို မသောက်ချင်သူတွေ အနေနဲ့ရော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်လို့ အစာအိမ်ထိမှာ ကြောက်တတ်သူတွေအတွက်ရောသင့်တော်ပါတယ်။နာကျင်တောင့်ခဲနေတဲ့ ကြွက်သားတွေပေါ်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို ပြေလျော့စေတဲ့ Voltex လိမ်းဆေးမျိုး လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ လွယ်ကူစွာ လိမ်းနိုင်ပြီး လိမ်းပြီး မကြာခင်မှာ ဆေးအာနိသင်ရရှိတာကြောင့် ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့ပြီး နာကျင်တာ သက်သာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ရက်မှာ ဘာမှမဖြစ်သလို ပေါ့ပါးစွာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဆက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
📌- ရေချိုးခြင်း ထုံထိုင်း ညောင်းကိုက်နေတဲ့ချိန် ရေချိုးချလိုက်ရင် ပေါ့ပါးလန်းဆန်းတာကို သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။
မနက်အိပ်ယာထ တစ်ကြိမ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး တစ်ကြိမ် ရေချိုးပေးခြင်းဟာဆိုရင် တစ်နေ့တာပင်ပန်းသမျှ နာကျင်သမျှတွေ ကို သက်သာပြေလျော့စေမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှု သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်လာပြီး တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ဒါကြောင့် ရေချိုးဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့။
📌-Yoga လုပ်ခြင်း ဟုတ်ပါတယ်။
Yoga လုပ်ခိုင်းတာပါ ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်းမှာ အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တဲ့ yoga ကို ပြုလုပ်ပေးမှသာ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ခဲ့သမျှ တောင့်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yoga ကို လုပ်ရမှန်းတော့သိတယ် တစ်ခါတစ်လေ ပြေးလွှားတာမျိုးသာ လုပ်ပြီး Gym မှာမဟုတ်တဲ့အချိန်ဆို Yoga မလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီးတိုင်း yoga လုပ်ဖို့ကိုလဲ မမေ့သင့်ပါဘူးနော်။
ရေဟာ ဆေးပါပဲ။ ရေများများသောက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးစီးဆင်းမှု Blood Circulation ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်တာကြောင့် ကြွက်သားတွေပြေလျော့စေရုံသာမက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလဲ လျော့ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ (2-3 Liters) ဝင်အောင်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အားကစားတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ အပေါ်ကအချက်လေးတွေကို လုပ်ပေးခြင်းဟာဆိုရင် နာကျင်တာတွေကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့ပါ အားပြည့်လန်းဆန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပူမကျပဲ တငွေ့ငွေ့ဖျားနေရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ
Should You Wear Underwear To Sleep ?
ညအခါ မိမိအတွင်းခံကို ချွတ်အိပ်သင့် မအိပ်သင့်=========== ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီညတွေမှာ အိပ်စက်ချိန်တွင် မိမိအတွင်းခံဝတ်လျက် အိပ်သင့်မအိပ်သင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်… ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ တချို့က. Pajama ၊ တီရှပ် ၊ ပုဆိုး စသဖြင့် ဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်တတ်ကြပါတယ်…..